Bountysource: fanampiana ho an'ny tetikasa lozisialy maimaim-poana | Avy amin'ny Linux
Bountysource: Fanampiana ho an'ny tetikasa lozisialy maimaim-poana
lolbimbo | | hafa
1 Inona ny atao hoe Bountysource?
2 Mampiasà Bountysource
Inona ny atao hoe Bountysource?
Hita avy amin'ny fomba fijerin'ny mpamolavola Bountysource, dia tranonkala iray misy tetik'asa rindrambaiko maimaim-poana isan-karazany, ao anatin'ny tetikasa tsirairay dia misy "tascas" samy hafa, samy manana vola aminy (izay mety ho 0) tsirairay avy ireo tascas ireo, ary raha vitantsika izany ankoatry ny fanampiana amin'ny ny fampandrosoana ny rindranasa amin'ny rindrambaiko maimaim-poana dia afaka mahazo dolara vitsivitsy ihany koa isika.
Eny, raha tsy mpamorona ianao (na eny) ary ohatra hitanao fa misy fampiasa tsy hita ao anaty rindranasa iray, azonao atao ny manokatra bara vaovao ary manolotra vola hamita azy, na raha efa noforonina izy io dia azonao atao ny mampitombo ny sandan'ny bara, izany hoe miasa toy ny crowdfunding.
Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa ianao ao Wikipedia
Ny Bountysource dia tafiditra ao anaty github, izany hoe, mba hamenoana ireo "lahasa" dia mila manao tsindry ianao ary mampiseho fa mandeha tsara ny fampiasa.
Satria tsy mety ho hafa izany, dia afaka mahita ny kaody web amin'ny github.
Raha hisoratra anarana dia afaka mampiasa kaonty github antsika manokana isika.
Manana a mpikatsaka izay ahafahantsika mitady ny fiteny fandaharana, ny vola ...
Vantany vao nifidy ny lahasa ianao dia tsy maintsy mametraka ny rohy github izay ananantsika ny kaody miaraka amin'ny vahaolana ary hazavao izay nataonay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Bountysource: Fanampiana ho an'ny tetikasa lozisialy maimaim-poana
Hevitra mahaliana. Ho toy ny doka voasokajy manolotra asa ho an'ny mpamorona hamaha olana manokana izany.
Tetikasa mahaliana, fomba tsara handrisihana ny fampandrosoana ny programa, misaotra tamin'ny fampahafantarana. Raha ny tokony ho izy dia heveriko fa rehefa miteny ianao hoe "tascas" dia "asa" no tianao holazaina ary ny fandikana azy dia lahasa amin'ny teny Espaniôla.
Faly be aho fa mihatsara isan'andro ny rindrambaiko maimaimpoana
Hevitra tsara, satria ny tovolahy ao amin'ny GNUPanel dia ho faly kokoa taorian'ny faharesena tamin'ny fanentanana tsy nahomby nataon'izy ireo tao amin'ny IndieGoGo.
Ny tsara indrindra dia mampiasa Bitcoin koa izy ireo, vola marina noforonina miaraka amin'ny Free Software.
Fanomezana sy fidiram-bola ao amin'ny DesdeLinux. Manolotra angona misimisy kokoa izahay